UDaniel Fopiani. Udliwano-ndlebe nombhali we Intliziyo yabarhaxwayo | Uncwadi lwangoku
UDaniel Fopiani. Udliwano-ndlebe nombhali wencwadi ethi Intliziyo yabarhaxwayo
Ukufota: UDaniel Fopiani, iprofayili ye-Twitter.
UDaniel Fopiano Uvela eCadiz, iSajini yeMarine Corps kunye nombhali. Sele ephumelele amabhaso amaninzi oncwadi kunye nenoveli yakhe yangaphambili, Uncuthu lwengoma yobumnyama, wayengowokugqibela eCartagena Negra 2020. Ngoku iyabonisa Intliziyo yabarhaxwayo. Kule nto udliwano ndlebe Usixelela ngaye nokunye okuninzi. Ndiyalixabisa ixesha kunye nobubele bakho ngokundikhonza.
UDaniel Fopiani - Udliwano-ndlebe
UNCWADI OLUTHETHAYO: Inoveli yakho entsha inesihloko Intliziyo yabarhaxwayo. Usixelela ntoni ngayo kwaye yavela phi le mbono?
UDANIEL FOPIANI: Ingcamango yale noveli yavela ngaphezu kweminyaka elishumi elinanye eyadlulayo, xa ndandiqala ukubeka unyawo kwisiqithi sase Alboran kwaye andizange ndikwazi ukuzibamba kodwa ndinxulumanise laa ndawo incinci yomhlaba kwenye yeenoveli zika-Agatha Christie ezifundwa kakhulu: Abamnyama abalishumi.
En Intliziyo yabarhaxwayo, ukongeza kwimfihlakalo, ukukrokra kunye nokubulawa kwabantu, siya kufumana umkhondo we imbonakalo kwi ukufudukela kwelinye ilizwe ngokungekho mthethweni okanye ukudityaniswa kwe abafazi emkhosini, phakathi kwezinye iinkcukacha ezifihliweyo, ndiyathemba, abanye abafundi baya kukwazi ukutyhila.
I-DF: Enye yeencwadi zokuqala endazifundayo yayiluguqulelo olulungele abantwana Uhambo oluya kwiZiko loMhlaba, nguJules Verne. Kungumbulelo kuye nakwabanye ababhali bakudala ukuba ndingumfundi kunye nombhali namhlanje, ngaphandle kwamathandabuzo. Ngeshumi elinesihlanu okanye elinesithandathu ndaqala ukubhala ezinye amabali, ndikhumbula ukuba eyokuqala endawongwayo yayiyeyokuqala Umxholo wekrisimesiYayilukhuphiswano oluphantsi, kodwa lwandinceda kakhulu ukuba ndikunandiphe ukubhala ndize ndihlale ndizama ubomi bam bonke.
I-DF: Ndiye ndafunda kakhulu mva nje Cartarescu. Emanuweli UCarrere ngomnye wababhali endihlala ndithanda ukuncoma.
I-DF: Ndandikade ndiyithanda kakhulu loo nto I-Poirot, nangona ukuba bendinethuba lokuhlala phantsi ndincokole nomlinganiswa okwethutyana, bendiya kukhetha ukuba neebhiya ezimbalwa kunye USherlock Holmes. Ebengumlinganiswa ophawule ubutsha bam kakhulu.
I-DF: Andinazo izinto zokuzonwabisa ezingaqhelekanga. Mhlawumbi yindawo yokusebenza icocekile kwaye ilungelelanisiwe. Ngamanye amaxesha, ndiye ndanxiba ezinye jazz imvelaphi.
DF: Ndihlala ndibhala mi desktop, kwaye ndiyenza xa umsebenzi neembopheleleko zivuma. Ndiyathemba ukuba iyeza imini apho ndim okhetha umzuzu wokubhala.
I-DF: Asikuko ukuba kukho ezinye iindidi endizithandayo, kodwa oko Ndandidla ngokufunda yonk’ into yaye yahlukahlukene. Andiqondi ukuba ndakhe ndafunda iinoveli ezimbini ezimnyama zilandelelana, Ndiyathanda ukungenelela kuhlobo kunye nomxholo. Ndingumthandi omkhulu webali ngokubanzi, ndonwabela kakhulu ukubona indlela abanye ababhali abawabhala ngayo amabali abo, iyelenqe okanye uhlobo oluthile yinto ephantse ithathe umva xa ndikhetha ukuba yeyiphi na incwadi endizakuthatha amehlo am.
I-DF: Ngoku ndiyafunda I-Solenoid, ukusuka eCartarescu. Kwaye nangona sele ndinezahluko ezicwangcisiweyo malunga nento enokuba yinoveli entsha, ngoku ndinjalo uphehlelelo-lugxile de Intliziyo yabarhaxwayo, ngoko andiqondi ukuba ndiza kukwazi ukubhala kakhulu kwiinyanga ezimbalwa ezizayo.
I-DF: Abathengisi beencwadi kunye nabapapashi ngokubanzi bayavumelana ukuba inani le Abafundi kunye nabafundi iyanda, ke ziindaba ezimnandi kungekuphela nje kuthi thina bazinikeleyo koku, kodwa kuba ndicinga ukuba ukufunda nokufundisa zizinto ezixabisekileyo eluntwini.
I-DF: Andiqondi ukuba inokususwa akukho nto intle ubhubhani ofana nalo sijongene nawo. Noko andiyifumani. Ukukuxelela inyani, ayifani nokuba ndiziva ndifuna ukubhala okanye ukuthatha ithuba lemeko ukuze ndisebenze inoveli malunga nobhubhane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » UDaniel Fopiani. Udliwano-ndlebe nombhali wencwadi ethi Intliziyo yabarhaxwayo
Yolanda Fidalgo. Udliwano-ndlebe nombhali wencwadi ethi The Bonfires of Heaven